3 ekpere siri ike iji nwetaghachi ọrụ gị ?
Ekpere siri ike nke 3 iji nweta ọrụ ahụ. Ọrụ na-abụkarị ihe na-akpata nchegbu, ọbụlagodi ndị funahụrụ ọrụ ha masịrị ha nke ukwuu. Ajuju a "mana gini ka m mehiere?" O ju anyi n’obi anyi ajuju ikike anyi. Mana nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ mgbe ihe kpatara ọrụ gị enweghị ihe ọ bụla gbasara gị yana ọ kpatara na ebumnuche ndị karịrị gị. Ogwu a siri ike ma sie ike ichikota, yabụ anyi choro inye gi obere ume iji weghachite oru gi furu efu. Lelee ahịrịokwu atọ siri ike ịlaghachi azụ iji nyere gị aka n'ọchịchọ ị na-alaghachi ọrụ ochie gị.
1 Ekpere siri ike nke 3 iji nweta ọrụ ahụ
2 Ekpere ka iweghachi oru na aririọ nke ọtutu ndi nsọ
3 Ekpere ka iweghachite oru na aririọ nke San Antonio
4 Ekpere ka iweghachite oru na intercession nke St. Cyprian
Hụ kwa ọdịnaya ndị ọzọ gbasara obi ebere, emume na ekpere maka ụwa oru:
Ekpere ka iweghachi oru na aririọ nke ọtutu ndi nsọ
O! Ezigbo nne anyị nwanyị Aparecida Oh Rita dị nsọ nke Cassia Oh ebube m Saint Jude Thaddeus, onye nchebe nke ihe na-agaghị ekwe omume. Santo Expedito, onye nsọ nke oge ikpe azu na Saint Edwiges, onye nso nke ndi nkpa nọ na-arịọ Nna maka m (nye aha gị) A na m arịọ ya ka o nyere m aka ịlaghachi n'ọrụ m ka ha wee kpọọ m ọzọ, ngwa ngwa. M ga-eto gị ma na-eto gị mgbe niile m ga-akpọrọ gị isiala. Kpee-ekpere: 1 Nna Anyị na Nnụnnụ Usọ 3 Ana m atụkwasị Chineke obi n ’ike m niile ma rịọ ya ka o nye ìhè na ụzọ m na ndụ m, Amen.
Kwuo nke a kpee ekpere ụbọchị atọ n’usoro, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume n'otu oge. Họpụtakwa ebe dị jụụ ma dị jụụ ebe a gaghị enye gị nsogbu, ka i wee nwee ike lekwasị ebumnuche gị echiche n'ụzọ dị mma yana okwukwe na obi ike na a ga-enweta amara a.
Ekpere ka iweghachite oru na aririọ nke San Antonio
«Ọ bụrụ na ịchọrọ ọrụ ebube, gaa San Antonio, ị ga -agbanahụ ekwensu na ọnwụnwa nke nwa. Naghachi ndị furu efu Ụlọ mkpọrọ ahụ siri ike na -agbaji, na mgbe oke ifufe nyere ohere n'oké osimiri nsogbu. Site na ịrịọ arịrịọ gị Ihe otiti, njehie, ọnwụ gbaga, Ndị na-adịghị ike ga-esi ike ma bụrụ ndị ahụ siri ike. Naghachi ihe furu efu ... (kwugharịa ugboro 3) Ihe ọjọọ niile nke mmadụ Maka, Ighaghachi, Gwa anyị ndị hụrụ ya; Ya mere kwuo Paduan. Naghachi ihe furu efu ... (kwugharịa ugboro 3) Otuto dịrị Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ. Dika odi na mbido, ugbua na mgbe niile Amen. Naghachi ihe furu efu… (kwugharịa ugboro 3) V. Kpee ekpere maka anyị. A. Ka anyị tozuo oke nkwa nile nke Kraist. Naghachi ihe furu efu… (megharịa ugboro 3) Kpee ekpere Nna Anyị na Ekele Mary.
Kwuo nke a ekpere ụbọchị ma-ọbụ dịka achọrọ, ma nye oriọna ekele nye Anthony Anthony mgbe enyere amara. Saint Anthony bu Saint nke anyi gha aghaghi ịkpọ oku maka ihe fufuru, ka inwere ike iji nke a Ekpere maka ịhụnanya, nzube, ego ma ọ bụ ọnọdụ ọ bụla ọ dị mkpa ka emeghachite.
Ekpere ka iweghachite oru na intercession nke St. Cyprian
“Santo Antonio bụ osisi Mandingo, Santo Onofre bụ osisi Mirongueiro. Oh, oh, my Cypriot senti ... Onye oji nke maara ka esi kpo afa nke oma .. Mee ya n’ime nkiti, o na-ekwu obere okwu na ara bu ya! ”San Cipriano, daalụ. Na ọ ga-ekwe omume na m (kwuo aha gị) ga - enweta ọrụ m chọrọ (kwuo ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ gị) bụ Bu kariri mmadụ ole ga-agụ ozi a! Saint Cyprian, dibịa afa na onye Kristian, onye ezi omume na onye ajọ omume, onye maara ihe na onye isi na nka okpukpe ya, ana m akpọku gị na obi m niile, ahụ m niile, mkpụrụ obi m na ndụ m iji nweta ebumnuche nke ịlaghachi ọrụ a (kwuo aha ụlọ ọrụ ahụ). M na-arịọ ndị agha niile dị elu nke Atọ n'Ime Otu, ike nke oké osimiri, ikuku, ọkụ, ọdịdị na eluigwe na ala ka ha mee ka ọrụ a daba n'aka m ma kee m kpamkpam (kwuo aha gị zuru ezu). Ka ọrụ a n'ime (sịnụ aha ụlọ ọrụ) bụrụ nke m ruo mgbe ebighi ebi, na n'okpuru NKE A NSỌ ọrụ a enweghị ike ịbụ nke onye ọzọ ma e wezụga m (kwuo aha gị). Mee ka onye na-ego ego n’ọrụ ghara ịhụ ndị ọzọ na-aga ime ihe ọzọ ma mụ onwe m (kwuo aha gị). Ọ bụrụhaala na onye njikwa ego anaghị akpọ m (kwuo aha gị) ịgwa gị na ọrụ ahụ bụ nke m, ha agaghị enwe obi ụtọ na oge ọ bụla ha nụrụ aha m (kwuo aha gị) ha ga-ejide n'aka na m bụ onye m ga-akpọtụrụ . orụ Oru ebube Eluigwe rigoro, wetara m ọrụ ahụ (ka anyị kwuo aha ụlọ ọrụ) m chọrọ ma chọsie ike. Ya mere, mee ya, o g'eme, k'a mee. Ekwere m na m ga-enweta ọrụ m chọrọ n'aka m (nye aha gị) ruo mgbe ebighi ebi.
Nke a Ekpere siri ezigbo ike ekwesịrị ime ya n'oge Usen 3 ke ukem ini ye akwa mbuọtidem ye udorienyung! Jiri nkeji ole na ole chee echiche banyere ndụ gị n’ime eziokwu ọhụrụ a, yana obi ụtọ niile ịlaghachi n’ọrụ ochie ahụ ga-ewetara gị. Ọ bụrụ n’ezie kpebisiri ike na ịlaghachi na ọrụ ochie gị bụ nhọrọ kachasị mma, lelee ememe aghụghọ 4 iji nweta ọrụ gị ma nyekwuo gị ike.
Ekpere siri ike iji nweta amara ma mezuo ebumnuche gị niile